सिटी स्क्यान किन गर्नुपर्छ ? सिटी स्क्यान गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू – Wire Nepal
सिटी स्क्यान किन गर्नुपर्छ ? सिटी स्क्यान गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
दास शिक्षण अस्पताल रेडियोलोजी विभागका विद्यार्थी हुन।
PREVIOUS POST Previous post: रगत र रक्तदान : जान्नुस् यी १२ तथ्य
NEXT POST Next post: एमआरआइ गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस्